May 3, 2016 12:01AM EDT
Dowladda iyo Maleeshiyaadka ayaa u Hanjaba kuna Tacaddiya Warbaahinta
Ehelada iyo weriyeyaasha ay saaxiibadda ahaayeen ayaa ku tukanaya meydka weriye Yuusuf Keynaan oo la aasay 21-kii Juun 2014-ka. Weriye Yuusuf Keynan ayaa Muqdisho ku dhintay ka dib markii ay ku qaraxday bambo la rumeysan yahay in loogu xiray gaarigiisa, laguna qarxiyay.
© Xuquuqda sawirka waxaa leh Getty Images/Maxamed Cabdiwahaab 2012
(Nairobi) – Dowladda Soomaaliya iyo kooxda Islaamiga ah ee hubaysan ee Al-Shabaab ayaa waxay adeegsadaan xeelado xadgub ah, si ay saameyn ugu yeeshaan warbaahinta, Human Rights Watch ayaa sidaasi ku sheegtay warbixinta ay maanta soo saartay oo ku aaddan Maalinta Xorriyadda Safaaxadda Adduunka. Dowladdu waa in ay qaaddaa tallaabo ay ku mujinayso sida ay uga go’an tahay in ay soo afjarto hanjabaadda iyo tacaddiyada ka dhanka ah wariyeyaasha ee ay geystaan ciidammadeeda ammaanka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Baahida ay Soomaaliya u qabto warbaahin xor ah oo firfircoon ayaa muhiimad gaar ah waxay sii yeelanaysaa inta uu socdo hannaanka doorashada la qorsheeyay 2016.
January 23, 2013 Photograph